Tag: rahona | Martech Zone
Sarotra ny mitondra fampitahana amin'ny enta-mavesatra apetraka amin'ny mpizara tranonkala ka izao no mandeha. Alao an-tsaina hoe mpizara tranonkala ianao ary voatabia voatabia ireo mpitsidika anao. Raha manana sakafo iray na roa kapoaka ianao dia azonao atao tsara ny mitondra azy. Ataovy am-pelatanan-jatony vitsivitsy ny tananao ary tsy misy mahazo mihinana izay ilana azy ireo ny sakafo. Raha toa ka azonao atao ny mampihena ny haben'ny kapoaka tsirairay avy,
Alarobia, Desambra 16, 2015 Alarobia, Desambra 16, 2015 Trano Chip